ကွာရှင်းသတင်းကြေညာပြီး နှစ်လအကြာမှာ တွေ့ရတဲ့ ဆောင်ဂျွန်ကီ…………………..
တောင်ကိုရီးယား အနုပညာစုံတွဲ ဖြစ်တဲ့ ဆောင်ဂျွန်ကီ နဲ့ ဆောင်းဟေကို တို့ ကတော့ လူတိုင်းအားကျရတဲ့ စံပြစုံတွဲ ပါ။ဒါပေမယ့် လည်း အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အိမ်ထောင်သက်က ကြာကြာ မခံ လိုက်ပဲ ပြိုကွဲ သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ အိမ်ထောင် ရေး အဆုံးသတ်က […]
August 26, 2019 Knowledge
အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့လက္ခဏာများအ ကြောင်း……….
အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့လက္ခဏာများ ဒီအချက် တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင် အပျိုကြီး ဖြစ်မယ် လို့ မပြောဘူးနော် ၊ဒါမဲ့ အပျိုကြီး ဖြစ်နေသူ တွေကတော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီ နေတာ သေချာပါတယ် …။ 1) ရည်းစားစကား ပြောခံရသည်ကို နှစ်သက်သော်လည်း အဖြေတောင်းလျှင်မူ ကတ်ကတ်လန် […]
(၂) လအတွင်းမှာ ချိုင်းသားကို ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း………….
ချိုင်းချွေးထွက်လို့ အကျီင်္မှာ ချွေးကွက်ကြီးဖြစ်တာမျိုး ၊ ချိုင်းအနံ့ထွက်တာမျိုး ၊ လက်ပြတ်ဝတ်ရင်တောင် ချိုင်းသားမည်းနတာမျိုး စတဲ့ဒုက္ခတွေက မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာ ရှိနေပါတယ်။ ချိုင်းသားမည်းလို့ လက်ပြတ်မ၀တ်ရဲတာတွေမဖြစ်တော့အောင် ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ (၁) နေကြာဆီ နေကြာဆီမှာ ဗီတာမင် အီ ပါတာကြောင့် အသားအရေကို ၀င်းပ ၊ စိုအိစေပါတယ်။ […]
August 24, 2019 Knowledge
အပြာရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးများ………………
လူကြီးတော်တော်များများကတော့ ဒီလိုအပြုအမူကို ဘာသာရေးအရ၊ လူမျိုးရေးအရ ရှက်စရာကောင်းတယ်၊ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ မြင်တတ်ကြပေမယ့် ကျန်းမာရေးအရတော့ ဒါသည် လူတိုင်းလုပ်နေကျ ပုံမှန်အပြုအမူတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း တန်ဆေး၊ လွန်ဘေးဆိုသလို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဘာမှမလုပ်ဘဲ အပြာရုပ်ရှင် မကြည့်ရမနေနိုင်တာ၊ လွန်လွန်ကျူးကျူး အာသာဖြေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ ခုဆောင်းပါးမှာ အကောင်းအဆိုး၊ အကြောင်းအကျိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ […]
August 23, 2019 Knowledge
တစ်ယောက်တည်းပေမယ့် ရည်းစားရှုပ်ပွေတယ်လို့ အထင်ခံရတဲ့ ရာသီခွင် (၃)ခုအ ကြောင်း
တချို့လူတွေက တစ်ယောက်တည်းပေမယ့် ဥပဓိရုပ်ရည်ကြောင့် ရည်းစားရှုပ်ပွေတယ်လို့ အထင်ခံရတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုပဲ ရှင်းပြပြ တစ်ယောက်တည်းလို့မထင်တဲ့အပြင် ရည်းစားများတယ်လို့တောင် အထင်ခံတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်ရာသီခွင်ဖွားတွေ ဖြစ်မလဲ။ (၁) Aries (မိဿရာသီဖွား – မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၁၉ ) မိဿရာသီဖွား ကတော့ […]
August 22, 2019 Knowledge
ချစ်ပါတယ်ဆိုပီး ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ ယောကျာ်းတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်များ
ပည့်တန်ဆာနဲ့ အိပ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေကမယုတ်မာဘူး တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး သူတို့လိုအပ်တာကို ၀ယ်တာရဲ့.. ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အတူအိပ်ချင်ကြတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကတော့ ပိုပြီး ရုပ်မာတာရဲ့.ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတဲ့အပြင် လူတစ်ယောက်ရဲ ဘ၀ရော နှလုံးသားရော သေအောင်သတ်သွားတာမျိူးပေါ့. အညှာလွယ်တာကို အယုံလွယ်တာကိုးလို့ ပြစ်စလတ်ခက်ပြောချင်ရင် ကိုယ့်တိုင်ကရော တကယ်ချစ်ရင် ဘ၀ပေးပြီ သက်သေပြပါလို့ အချစ်ကိုဗန်းပြပြီး မတောင်ဆိုဘာဘူးဆိုတာ […]
August 19, 2019 Knowledge
အသက်၂၀နဲ့၃၀ကြား အရွယ်ကောင်းမှာတင် ချမ်းသာလာဖို့လျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်း(၇)ခသွယ်
အသက်၂၀နဲ့၃၀ကြား အရွယ်ကောင်းမှာတင် ချမ်းသာလာဖို့လျှို့ဝှက်ချက်နည်းလမ်း(၇)ခု ကျွန်တော်တို့အားလုံးချမ်းသာချင်ကြတယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ချမ်းသာချင်မှာအသေအချာပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် ငယ်စဉ် ၂၀ နဲ့ ၃၀ကြားလောက်မှာ ချမ်းသာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ချမ်းသာဖို့ဆိုတာလည်း ဒီနေ့လုပ် ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ငယ်တုန်းမှာ ကြိုးစားတာပိုကောင်းပါတယ်။ အသက် ၂၀ကနေ ၃၀ကြားမှာ ချမ်းသာချင်ရင်တော့ အောက်ပါအချက်လေးတွေကို […]